/ ngwaahịa / Hormones / Drospirenone ntụ ntụ (67392-87-4)
Rating: SKU: 67392-87-4. Category: Hormones
Drospirenone ntụ ntụ bụ sịntetik progestin bụ analog na spironolactone. A na-ahụ ya n'ọtụtụ usoro nhazi ọmụmụ. Drospirenone dị iche na progestins ndị ọzọ sịntetik na profaịlụ ya na nkà mmụta ọgwụ na ọmụmụ ihe na-egosi na ọ dị nso na progesterone nkịtị.
Usoro Molecular: C24H30O3
Molekụla arọ: 366.49
Mgbochi ọgwụ ịmụ nwa agaghị echebe gị pụọ n'ọrịa ndị a na-ebute site na mmekọahụ - gụnyere nje HIV na ọrịa AIDS. Iji condom bụ naanị ụzọ iji chebe onwe gị pụọ na ọrịa ndị a.